«Tena Fisandratana!» -
11/04/2018 admintriatra Tresaka 0
Tsy ny lafiny ara-toekarena velively na ny lafin’ny fandriam-pahalemana no tena olana eto Madagasikara fa ny lafin’ny toe-tsaina, araka ny nambaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny BANI Ivato omaly. Io lafiny ara-toetsaina io no ilàna « Tena Fisandratana » haingana indrindra, io rahateo koa no fototry ny zavatra rehetra.
Tsy afaka hanarina ny tontolon’ny toekarena, ny fandriam-pahalemana ary ny sosialy mihitsy isika raha toa ka mbola izao toe-tsaina mpandroba, mpandrava ary mpanakorontana izao hatrany no tadiavin’ny sasany hampanjakaina eto amin’ity tany sy fanjakana ity. Izay no « Tena Fisandratana » tsara sy mendrika indrindra, ary tokony hirosoan’ny tsirairay haingana be tokoa.
Izao mantsy ny zavatra mampalahelo eto: tsy ilay foto-kevitra fonosin’ilay hoe “Fisandratana” izay tena zava-dehibe tokoa ho an’ny firenena sy ny taranaka ho avy no ametrahan’ny sasany adihevitra fa ilay namorona azy. Iza foana no zava-nisy teto hatramin’izay, tsy ny maha zava-dehibe ny zavatra no ametrahana ny adihevitra fa ilay namorona azy. Hatramin’ireo fotodrafitrasa no lasibatra noho izany toe-tsaina izany; potehina satria ny mpitondra teo ohatra no nanorona azy, tsy asiana fanohizana satria tsy ny tena no vy nahitana azy, sns.
Fa ny tena loza dia ny zava-misy amin’izao fotoana. Tsy vitan’ny hoe manimba sy ny mamotika fotsiny ihany fa mamorona tsaho, manely lainga hampisavorovoroana ny saim-bahoaka tsy hifantoka amin’ny asa fivelomany, tsy hifantoka amin’ny adidy aman’andraikiny. Izany hoe, ny fiainam-piharian’ny tsirairay mihitsy no lasa takalon’aina noho ny fitivian-tenan’ny sasany, ary io fitiavan-tena io avokoa no fototry ny fahavoazana sy ny fahoriana nozakain’ny vahoaka teto hatramin’izay.
Noho izany loza mitatao ho an’ny firenena sy ny vahoaka izany no antony nahatonga ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina niteny ny hoe “Fisandratana ara-toetsaina” omaly. Ny mpanohitra milaza ny hitondra firenena sy hitantana vahoaka moa no tena niantefan’io hoe “Fisandratana ara-toetsaina” io.
Nihetsika ny fanjakana : Mpanao kidnapping 19 sarona
Mpaka an-keriny miisa sivy ambin’ny folo no efa tra-tehaky ny zandary sy ny polisy nanomboka tamin’ny fiandohan’ity taona 2017 ity, taorian’ny ezaka sy ny hetsika nataon’ny fitondram-panjakana. Vehivavy ny telo tamin’izy ireo, ary hahitana mpitandro ...Tohiny
Fampianarana ambony : Hamafisina ny fampianarana hampitain-davitra